PM Ntsay Chritsian tao amin'ny Televiziona Malagasy: Ireo hevi-dehibe nambarany
lundi, 29 juin 2020 12:03
Mitohy hatrany ireo fepetra efa nisy nandritra ny hamehana ara-pahasalamana teo aloha amin'ny 15 andro manaraka.
Tsy miova ny fepetra mikasika ny faritra Analamanga, hamafisina ny fanantanterahina izany.
Alefahana ny fepetra ao amin'ny distrikan'i Toamasina I sy II, Moramanga ary Fenoarivo Atsinanana. Noho izany dia afaka miasa daholo ny rehetra hatramin'ny 5 ora hariva ary ny fitaterana rehetra dia mifarana amin'ny 7ora hariva.
Miverina mianatra ny alakamisy ho avy izao ireo mpianatra miatrika fanadinam-panjakana, saingy hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra.
Tsy mbola misokatra ny zotra nasionaly ary hamafisina ny "barrage sanitaire" .
Ankoatran'ny faritra hafa dia mbola mitohy ny "couvre feu" manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 4ora maraina ao amin'ny faritra Analamanga sy ireo distrikan'ny Toamasina I sy II, Moramanga ary Fenoarivo Atsinanana.
Mbola mitohy ny tsy fahafahana mamory olona mihoatra ny 50 isa.Tsy misokatra ny toeram-pilanonana sy famoriana olona.
Hamafisina fa tsy mbola misokatra ny fitaterana an'habakabaka saingy malalaka hatrany ny fitateran'entana .
Eo amin'ny fepetra ara-tsosialy sy toekarena indray, dia mbola mitohy ny ezaka ataon'ny avy ao amin'ny Ministera misahana ny varotra sy ireo rantsa-mangaika ao aminy mifehy ny vidin'entana.
Aorian'ny fandaminana atao dia hiverina tsikelikely ny tsena mora izay tena manamaivana ny vahoaka amin'ny fiatrehana ny valan'aretina.
Mitohy ny "vatsy tsinjo" amin'ireo disitrika sy toerana tena mila izany vokatry ny fihibohana.
Mitohy ihany koa ny fanomezana ny "tosika fameno" ho an'ireo tena sahirana ary hapetraka tsy ho ela ny toeram-pisakafoana" kaly tsinjo".
Hamoraina ny fandraisana an-tanana ireo mitondra ny tsimokaretina na soritraretina, ka manomboka ny alarobia ho avy izao dia afaka mandray azy ireo ny eny amin'ny "village Voara" eny Andohatapenaka.
Atsangana ny "base de données" ahafahana manara-maso ireo "cas positif" izany hoe ireo olona rehetra efa vita fitiliana ka mitondra ny tsimokaretina dia ho raketina ao avokoa.
Ary farany dia ho atao "contre test" daholo ireo marary rehetra efa nihiboka nandritra ny 12 ka hatramin'ny 14 andro, mba ahafahana mamaritra ny fahafahan'izy ireo mivoaka ny toerana itsaboana azy.
Mikasika ny datim-panadinana indray kosa dia nanazava ny Praiminisitra fa miankina amin'ny fivoaran'ny valan'aretina no hamoahana izany saingy tsy ho taona fotsy ity taona ity fa hisy ny fanadinam-panjakana.